Amaphiko aphukileyo nguMnu - Okunye
Le ngoma yeklasikhi yaphefumlelwa yincwadi yomculo uJohn Lang wafunda ebizwa Amaphiko Aqhekekileyo , eyabhalwa yimbongi yesithandi sobulumko saseLebanon uKahlil Gibran. Incwadi, eyabhalwa ngo-1912, libali lothando oluya kutshabalaliswa yintlanganiso yoluntu.
Umxholo wayo ubonakalisiwe kule ngoma: ngokuchola iziqwenga zobomi bakho kwaye uqhubeke. Kukho inqaku lentlungu, nangona kunjalo, njengoko imvumi icela intombazana ukuba yolule amaphiko ayo kwaye ibhabhe, ngethemba lokuba uthando luyakumbuyisa.
Umgca, 'Thatha la maphiko aphukileyo kwaye ufunde ukubhabha' uvela kwingoma yeBeatles 'Blackbird.' UPaul McCartney noJohn Lennon bobabini bathathe umsebenzi kaKahlil Gibran, njengoko imigca emibini yokuqala ye-Beatles 'Julia' ivela kumbongo we-Gibran ka-1926 Isanti kunye Nogwebu : 'Isiqingatha sento endiyithethayo ayinantsingiselo, kodwa ndiyitsho nje ukufikelela kuwe, Julia.'
UJohn Lang ubhale le ngoma kunye noMnumzana Mphathiswa owayengumphathi weRichard Page kunye nomdlali wegitare uSteve George. NgokwePhepha, babesekhaya lakhe eKhalifoniya xa bobathathu beza nengoma malunga nemizuzu engama-20 bayirekhoda kumatshini weTape.
Lo wayengowokuqala kwi-albhamu yesibini kaMnu Mister. Inkampani yabo yokurekhoda, i-RCA, yayifuna ukukhupha ingoma yokuqala yokuqala, kodwa iqela lalwa nayo kwaye laphumelela. Ikhutshwe ngaphambi kwe-albhamu, le ngoma yaya kwi # 1 e-US ngo-Disemba ka-1985, ephawula impumelelo yeqela, elona lukhulu kwi-albhamu yabo yokuqala yaba 'ngabazingeli bobusuku,' elalikwi- # 57.
Umntu ongatshatanga, 'uKyrie,' naye waya ku- # 1.
Ividiyo ibonisa uRichard Page eqhuba iThunderbird eguqulwayo ngommandla weLos Angeles owomileyo. Uza ecaweni, apho ukhetshe afike khona ukuze afumane isikhokelo esivela kuThixo, kwaye aqhubeke nohambo, olumsa elwandle.
Ikliphu emnyama nemhlophe yayibhekiswe ngu-Oley Sassone, oza kuqhubeka nokuhambisa iziqendu ze I-Xena: I-Princess yeQhawe kwaye IHercules: IiNdwendwe eziHamba . Kudliwanondlebe lwethu noSassone, wacacisa: 'Umxholo webali kunye nento endifuna ukuba abaphulaphuli bayive yayiyimbali yethu yeqhawe engqondweni yakhe. Abadanisi be-tango, bexhonywe ngemifanekiso yokulahleka kwakhe ngelixa eqhuba, bephosa imephu kwaye endaweni yoko belandela i-hawk ngaphezulu, ngokomfuziselo, umphefumlo wakhe, nelizwi lakhe ngaphakathi ngaphakathi limxelela ukuba aqhubeke-amkhokelele kwindlela entsha , isiqalo esitsha. '
I-VH1 yaya emoyeni ngo-1985, kwakuloo nyaka kwakhutshwa le ngoma. Ividiyo iqhube kakuhle kakhulu kwinethiwekhi, nakwiMTV, eyayineminyaka emine kuphela ubudala kodwa yaba yikumkani kumzi mveliso.
Imiboniso yokuqhuba kwividiyo yadutyulwa kumabala eoyile kufutshane nesikhululo senqwelomoya saseLos Angeles, kunye nakuPacific Coast Highway ePalos Verdes. Icawa yi-San Fernando Mission, isakhiwo esisembalini kwisithili seMission Hills eLos Angeles.
UClay Aiken wakugubungela oku kwi-albhamu yakhe ka-2006 Iindlela eziliwaka ezahlukeneyo , Yongeza umbongo wokuqala othethwe ngu-Erin Taylor. URichard Page kaMnu Mister wayencoma kakhulu ingoma ka-Aiken yengoma.
Ngo-2001, le ngoma yayisampulu yengoma kaTupac Shakur emva kokuba efile 'kude kube sekupheleni kwexesha,' eyayibonisa uRichard Page. Ifike kuphela kwi # 52 e-US kodwa yafikelela kwi # 4 e-UK.
Ndiyayiva ibiza emoyeni ngokuhlwanje iingoma
Iingoma molo ngu-lionel richie
james morrison andizukuvumela uhambe lyrics